Yoomiyyuu Haqaa fi Ummatatu Injifata! – Adda Bilisummaa Oromoo
[ June 12, 2019 ] Dabni Siyaasaa ABO Irratti Dalagamu Cehumsa Gara Dimokiraasiitti Taasifamu Yoo Gufachiise Malee Hin Milkeessu	Ibsa ABO
[ May 14, 2019 ] Dhaaba Ummatni Jaallatu Diinomsachaa Ummatichatti Firoomuun Hin Danda’amu !	Ijoo Dubbii ABO
[ April 27, 2019 ] የሀዛን መግለጫ ! የዶ/ር ነጋሶ ጊዳዳ ከዚህ ዓለም በሞት መለየትን በተመለከተ	Ibsa ABO
[ April 27, 2019 ] Ibsa Gaddaa! Du’aan Boqochuu Dr. Nagaasoo Gidaadaa Ilaalchisee	Ibsa ABO
[ April 23, 2019 ] Seenaa Qabsoo Oromoo Haaluudhaan Qabsicha Galii Isaa Hanqisuuf Shirri Xaxamu Kamuu Hin Milkaawu !	Ibsa ABO
Yoomiyyuu Haqaa fi Ummatatu Injifata!
(Ibsa ABO Irraa Kenname)
Biyya sirni cunqursaa keessatti diriirfamee humnaan bulfamtu keessatti Sabootni, sab-lammootnii fi ummatootni mirga isaanii kabajsiifatanii bilisummaan jiraatuuf, dimokraasii dhugoomsuu fi haqa argamsiisuuf wareegama ulfaataa kafalan. Qabsoo bilisummaa, haqaa fi dimokraasiif adeemsifamu keessatti ilmaan sabootaa fi ummatootaa addatti ammoo ummtni Oromoo wareega lubbuu fi qaamaa guddaa baasan. Har’as baasaa jiru. Harka diinaa bu’uun hiraar dhala namaaf hin malles irratti raawwatame.
Mootummaan Wayyaanee/EPRDF ilmaan ummatootaa hedduu akeeka kiyya deggeruu dhabdan kan jedhuun kumootaan mana hidhaa “jaanama lafa irraa” tahuun beekamu keessatti gidirsuun beekama. Gidiraa mana hidhaa keessatti irra gahaa tureenis kan qaamaan miidhaman, qalbiin hubamanii fi lubbuun dabarte hedduu dha. Hidhamtoota miidhaan suukanneessaa fi gaddisiisaan irra geessifame keessaa wayyabni ilmaan Oromoo akka tahanis beekamaa dha. Dhibbaan kan lakkaawamu qaama hir’uu ta’e. Dararama suukanneessaaf kumaan kan lakkaawamutu saaxilame.
Ummatni Oromoo fi qabsaawotni Oromoo addatti ammoo Qeerroon Bilisummaa hidhaa fi ajjeechaan boodatti hin deebisne, falmaa seenaa Impaayera Itophiyaa keessatti mul’atee hin beekne adeemsisuun mootummaa abbaa irree Wayyaanee/TPLF hundee dhaa raasee hidhamtoota akka gadi dhiisu dirqisiisuu irraa har’a ilmaan Oromoo fi kanneen biraa illee akka gadhiisu taasisuu irratti argama. Kanaaf Qeerroon Bilisummaa, qabsaawotnii fi ummatni Oromoo galata guddaa qaban.
Amma gaaffiin fuula duratti hidhaan sirnaa alaa fi gara jabinaan EPRDF gaggeessaa bahe itti fufa moo kanaan dhaabbata? isa jedhuu dha. Ammallee mana hidhaatti kan hafan jiru. Isaan kunis gadi lakkifamuu qaban. Kanneen seeraan ala nama dararaa bahan seeraan gafatamuu qaban. Kanneen nama ajjeesaa bahanii fi ajjeesaa jiran seeraan gaafatamuu akka qaban ummatni keenya guddisee gaafatuu qaba.
Hidhamtoota yakka homaatuu hin hojjanne haqaa fi dimokraasiif qabsaa’uu isaanii qofaan hidhaa keessatti mankaraaraa turan gadi dhiifamuu isaaniif ABOn gammachuu itti dhaga’ame ibsa. Ummata keenya kana nu dandeessiseefis kabajaa isaa ibsata. Kanneen mana hidhaa bahan, maatii, firoottanii fi jaallan isaaniinis baga gammaddan jedha. Ilmaan Oromoo fi kanneen biroo mana hidhaa keessatti hafanis akka gadi lakkifaman gaafata. Kana waliin kanneen yakkaan alatti waggoota dheeraaf manneen hidhaa Wayyaanee keessatti akka gidirfaman, qaamaa fi qalbiin hubaman taasisuu keessatti qooda qaban murtii seeraaf dhihaatanii hanga hin gaafatamnetti hidhamtoota hiikuu qofti gahaa akka hin tahiin ABOn hubachiisa.
Qabsaawotni, sabboontotnii fi Qeerroon Bilisummaa, walii gala ummatni Oromoo kan qabsaawaa turanii fi jiran sirna nama nyaataa kana of irraa dabruun bilisummaa fi walabummaa dhugoomsuuf akka tahe ifaa dha. Hanga kun hin dhugoomnee fi sirni abbaa irree karaa irraa hin maqsamnetti hidhaa fi ajjeechaan itti fufa. Kun har’allee karoorfamee itti bobba’muuf akka tahe ragaa qabatamaatu jira. Waan taheef ummatni Oromoo fi qabsaawotni hanga jijjiirraan bu’uuraa mirkaneeffamutti qabsoo itti jiran akka finiinsan ABOn dhaamsa isaa dabarsa.
Waxabajjii 1, 2018
Ibsa Gaddaa! Du’aan Boqochuu Dr. Nagaasoo Gidaadaa Ilaalchisee
Dabni Siyaasaa ABO Irratti Dalagamu Cehumsa Gara Dimokiraasiitti Taasifamu Yoo Gufachiise Malee Hin Milkeessu (Ibsa ABO – Waxabajjii 11, 2019) Jijjiirama Siyaasaa Itoophiyaa keessatti har’a mul’atu kana kan argamsiise qabsoo hadhooftuu fi wareegama qaalii Sabni [Read More]
Ajjeechaa Waraanni EPRDF Namoota Meesha-maleeyyii Irratti Raaw’achaa Jiru Cimsinee Balaaleffanna !